ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး အဖြစ်မှန်ဖော်ထုတ်ဖို့ ကင်တားနားတိုက်တွန်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်မှန်ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်ရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် ကင်တားနားက မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Immigration issue should be sorted out by the Law of Burma, before English rules our country and also 1982 law still valid and should not be change at all. We have thousands of Chinese and Indians living in our land for many centuries but they would never granted as Burmese Citizenship. This issue nothing to be related with Democracy Reform in the Country. Be fair, there are many countries in the world do not given citizenship regardless of how many years residing even legally in their countries. Do not put blame on Burma Government. There is nothing we can do. Totally agreed with President U Thein Sein that third countries should accept the Refugee - Rohingas. Aug 08, 2012 03:41 AM
ကင်တားနားကိုယ်တိုင် မောင်တောနဲ့စစ်တွေကို လာပြီးအဖြစ်မှန်ကို
လေ့လာသွားပြီးပဲ။ နောက်ထပ်အဖြစ်မှန်ကိုဘာလို့ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ လိုသေးလို့လဲ။ ဘာလဲ ဘင်္ဂလီတွေနာမည်ကောင်း မရလို့ မကျေနပ်ဖြစ်နေတာလား။ ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးက ဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်ပဲလား။ တိုင်းရင်းသားတွေမှာကော လူ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးလား။ ဘင်္ဂလီအတွက်သာ လူ့အခွင့်အရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကုလသမဂမှာမလုပ်ဘဲ တခြားအလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းလုပ်လိုက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကုလသမဂကပြဌါန်းထားတဲ့ ပဋိဥာဏ်စာမချုပ်ကို ချိုးဖောက်လို့ပါပဲ။
Aug 05, 2012 09:44 AM
ဘင်္ဂလီ က ဘင်္ဂလီပါပဲ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကို ရပ်တန်းက ရပ်ကြပါ။ တိုင်းရင်းသား မပြောနဲ့အုံး နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်တောင် မထိုက်တန်တဲ့လူတွေပါ။ အမေရိကန်မှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်တဲ့အခါ ဘာတွေ လိုအပ်လဲ ဆိုတာ လေ့လာလိုက်ပါအုံးလို့ ကင်တာနားကို ပြောချင်ပါတယ်။ လိမ်လည်၊ လုပ်ကြံထားတဲ့ သမိုင်းတွေနဲ့ ဘာသာရေးပြသာနာလိုလို လုပ်ကြံနေကြတဲ့ ဟာတွေကို ရခိုင်တွေရော မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါ သတိထား တုံပြန်သင့်ပါတယ်။ ဒါဘာသာရေး မဟုတ် လူမျိုးရေးလည်းမဟုတ် နိုင်ငံလုံခြုံရေးကို ချိန်းခြောက်နေတဲ့ တဖက်နိုင်ငံက လူတွေပါ။
Aug 05, 2012 10:58 AM